Nagu saabsan - Fuqing King Dnarmsa Spirulina Co., Ltd.
Fuqing King Dnarmsa Spirulina Co., Ltd. waxaa la aasaasay 1995.Waa shirkad farsamo sare leh oo isku dhafan oo leh cilmi-baaris iyo horumarin sayniska, cilmi-baarista bayotechnoolajiyadda iyo horumarinta microalgae, wax-soo-saarka microalgae, alaabta microalgae si qoto-dheer u shaqaynta iyo iibinta alaabta guriga iyo dibaddaba. King Dnarmsa wuxuu leeyahay todobo saldhig oo taran oo leh baaxad dhan 1 milyan oo mitir oo laba jibbaaran, machad algae iyo alaab algae - aqoon isweydaarsi qoto dheer. Sanado beeritaan kadib, waxaan soo saarnay kaniiniyada spirulina, kaniiniyada Chlorella, spirulina phycocyanin, polysaccharides, nacnaca kiniiniga algae, cabitaanka adag ee algae iyo noocyada kale ee spirulina microalgae alaabada qoto-dheer waxsoosaarka, soosaarka sanadlaha ah ee spirulina iyo dhammaan noocyada alaabada microalgae ayaa badan in ka badan 2,000 oo tan.
Sida shirkad tiknoolajiyad sare leh, King Dnarmsa wuxuu aasaasay aag 7,000 mitir oo laba jibbaaran oo algae ah - aqoon -isweydaarsi qoto -dheer oo ka socda Magaalada Fuqing. Waxaan haysannaa qalabyo taxane ah oo horumarsan sida shaandho otomaatig ah, isku-darka laba-qashin-qubka, samaynta kiniiniga otomaatiga ah, buuxinta kaabsulka otomaatiga ah, xirxirida otomaatiga ah iyo sumaynta laser. Laga soo bilaabo sanadka 2010, waxaan ka gudubnay shahaadooyinka ISO9001 oo ay ku jiraan shahaadada nidaamka tayada caalamiga ah ee 2008 iyo shahaadada aqoon isweydaarsiga heerka GMP.
Iyada oo leh xooggeeda ganacsi ee adag, tikniyoolajiyadda taranka oo aad u fiican, cilmi-baaris saynis oo adag iyo kobcin, King Dnarmsa wuxuu had iyo jeer siiyaa macaamiisha wax-soo-saar tayo leh oo tayo leh. Waxaa laga iibiyay in ka badan 60 dal iyo gobollo ay ka mid yihiin Mareykanka, Midowga Yurub, Kanada, Ruushka, Japan, Kuuriyada Koonfureed oo ay ku jiraan badeecooyin tayo wanaagsan leh. King Dnarmsa wuxuu noqday mid ka mid ah kuwa sida weyn u dhoofiya badeecooyinka spirulina ee Shiinaha, sidoo kale waa mid ka mid ah soosaarayaasha ugu waaweyn isla warshadaha.